Tuesday June 18, 2019 - 08:24:01 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Goob joogayaal ayaa sheegay in kooxo hubeysan ay gudaha magaalada Kismaayo ku dileen mid kamida siyaasiyiinta deegaanka oo sanadadii lasoo dhaafay u dhowaa maamulka isku magacaabay Jubbaland.
Dablay hubeysan ayaa dishay Cabdu Qaadir Ibraahim Xasan oo kamid ahaa dadka ku jira siyaasadda waxaana falkaas dilka ah lagu tuhmayaa Axmed Madoobe oo maalmihii lasoo dhaafay shirqoollo u maleegayay dhammaan siyaasiyiinta ay isku hayaan doorashooyinka madaxtinimada maamulka.
Musharixiinta utaagan in ay Axmed Madoobe kula baratamaan doorashooyinka soo socda ayaa horay u sheegay in ay ka baqdin qabaan in dilal lagu beegsaday dhammaan siyaasiyiinta ku lugta leh siyaasadda maamulkan.
Waxgarad iyo siyaasiyiin ku sugan Kismaayo ayaa walaac ka muujiyay dilalka magaalada kasoo cusboonaaday waxayna ka digeen in Axmed Madoobe uu ku kaco falal uu isaga hor leexinayo siyaasiyiintii horay ulasoo shaqeysay balse ay isku qabteen qaabka loo maareynayo doorashooyinka soo socda.
Ninka lagu dilay Kismaayo ee lagu magacaabo Cabdu Qaadir Ibraahim Xasan ayuu Axmed Madoobe bilihii lasoo dhaafay uga shakisanaa in uu xiriir laleeyahay Farmaajo iyo Kheyre.
Maleeshiyaad farabadan oo daacad u ah hoggaamiyaha Jubbalanad ayaa shalay gelinkii dambe illaa iyo xalay dhaq dhaqaaqyo ka waday Kismaayo, dhinaca kale warar laga helay xaafadda Dalxiiska ayaa sheegaya in xalay halkaas lagu dilay laba qof.
Xiisadaha siyaasadeed ee kajira magaalada Kismaayo ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan waxayna magaaladu laciir ciiraysaa ciidamo hubeysan oo kala taabacsan siyaasiyiinta xildoonka ah.